Ndeapi marudzi akasiyana esoftware bugs? - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Ndeapi marudzi akasiyana esoftware bugs?
Zvikanganiso zvekushanda zvinowanzobatanidzwa nekushanda kwechimwe chinhu Software chinhu. Workflow zvikanganiso zvine chekuita nerwendo rwemushandisi kana kufamba mu a Software kushandiswa.
Muenzaniso wekukanganisa kwekushanda ndeye kusaita (total scrum) yechirongwa mushure mekuisa mushandisi, sekudzvanya bhatani. Mushure mekuongorora, Software vaedzi vanogona kuona akonzeresa chikanganiso uye vochironga seimwe mhando yekukanganisa.
Kukanganisa kunoitika kana a Software basa harizadzise zvinotarisirwa. Iyi imhando yakakura yekukanganisa kunoitika kana iyo Software haina kuita sezvainoda. Kana iyo Software inodzorera kukosha kwakashata, ndiyo iyo mushandisi wekupedzisira anozofunga kuti ndeimwe yezvikanganiso zvekuverenga zvepurogiramu yekubuda.
Semuenzaniso, kana ruzivo rwakakosha rwemushandisi rwakachengetwa mu Software ari Database uye yakadzimwa mushure memwedzi mishoma nekuda kwebug mune kodhi, ipapo iyo Software haina kuvimbika. Software bvunzo dzinoratidza kushomeka mukushandisa uye kupa varidzi vezvigadzirwa chivimbo mukushanda chaiko. Zvikanganiso zvakajairika uye zvisina kujairika zvinogona kuwonekwa nemhando dzakasiyana dze Software bvunzo, senge inoshanda bvunzo, system yekubatanidza, tarisa mhando, nezvimwe.
Zvikanganiso zvine musoro zvinokanganisa mafambisirwo ari kuitwa basa re Software uye kuita kuti iite zvisina kufanira. Bug chinhu chisina kunaka kana chisina kunaka ne Software.
Kukanganisa uku kunogona kuitika nekuda kwechikanganiso chisingazivikanwi, kukanganisa kwekudzora kuyerera, kukanganisa kwekuraira, kusawirirana kwemhando yedata, kana murairo usipo. Inogona kutungamirira kune zvisingatarisirwi Software hunhu kana kubondera kamwe kamwe.
Kukanganisa kwerudzi urwu kunoitika kana maviri kana kupfuura Software zvikamu kana masisitimu akaparadzana anopindirana. Kana mugadziri kana programmer akakanganisa panguva yebudiriro, inoshanduka kuita bhagi inonzi defect.
panguva maitiro ekuedza, timu iri rinosangana nemhosho dzakasarudzika dzinokanganisa kuvandudza uye kuyedza maitiro. Kungoti zvipembenene zvinoshanda zviri nyore kugadzirisa pane kuita tsikidzi sezvakatsanangurwa mundima yapfuura hazvireve kuti vanoedza vanozviwana zviri nyore. Nekudaro, sekureba sekuziva kwavo mhando dzakajairika dzebug uye hurema izvo zvavanogona kusangana nazvo, vanogona kuzvigadzirisa zviri nyore.
Zvikanganiso mu Software kuyedza zvikanganiso zvechirongwa kana kusashanda mukati Software izvo zvinokonzeresa maitiro asingatarisike muchirongwa kana system. Mhando dzakasiyana dze Software zvikanganiso zvinosanganisira zvikanganiso zvinoshanda, mhando dze data kusawirirana, kudzokorora data, kukanganisa kukanganisa, chibatiso zvikanganiso, zvikanganiso zvehardware, zvisiri zvekushanda zvikanganiso, zvikanganiso zvekutaurirana, kukanganisa kubata kukanganisa, zvikanganiso zvekushanda uye kukanganisa kwekuita. Muchikamu chino, ini ndichakurukura mamwe emhando dzakajairika dze Software tsikidzi kana kukanganisa kunouya panguva Software kuongororwa uye sei Developers uye testers vanogona kubata navo.
Izvi hazvisanganisi zvikanganiso zvinokanganisa Software chigadzirwa chiri mubvunzo, asi zvikanganiso zvinoitika panguva yekuitwa kana kuita bvunzo maitiro, senge zvinyorwa, nzira dzekutevera, uye kushuma.
Software kukanganisa iko kukanganisa, kukanganisa kana kukanganisa muchirongwa chekombuta kana hurongwa hunoita kuti vabudise mhedzisiro kana isingatarisirwe mhedzisiro kana kuita nekusaziva. Inonzi kukanganisa kana kukanganisa musystem inokonzeresa maitiro asina kujairika kana kusabuda kweiyo system. Hukuru uye chimiro chekukuvadza icho a Software kukanganisa kunogona kukonzera kunogona kukanganisa maitiro ekuita sarudzo uye nhungamiro pa Software Unhu.
Kune akawanda marudzi etsikidzi mune hombe Software purojekiti munguva yehupenyu hwayo. Popular Software haina kushomeka-kukanganisa, asi njodzi dzetsikidzi hadzina kuoneka kana uchishanda ne niche kana tsika software, senge chinyorwa chakanyorwa nemudzidzi wechiremba kune chimwe chirongwa. Kuve nekujeka pamusoro pemhando dzakawanda dzezvikanganiso zvinobatsira Developers dzivirira zvikanganiso panguva yekuvandudza maitiro.
Kukundikana kwesoftware chikamu chisingadzivisike chehupenyu hwekutangisa kwesoftware. Sezvo isu tese tichiziva, software bugs zvinogumbura, software isiriyo inogona kudhura, inonyadzisa, inoparadza uye inotouraya. Verenga pamusoro kuti udzidze nezve mamwe eakajairika mabhugi auchasangana nawo panguva yekuvandudza software.
Miedzo yakawanda inovandudza huwandu hwese hwe software uye inotungamira mukugutsikana kukuru kwevatengi. Nekutora imwe nguva uye kugadzirisa maedzo nenzira iyi, Developers uye vanoedza vanogona kuve nechokwadi chekuti hapana zviputi zvinowanikwa zvichigonesa mhinduro dzinoita kuti software ienderane nemushandisi wekupedzisira zvisinei nekombuta kana sisitimu yekushandisa yakashandiswa. Chete kana vakanamatira kune software kuvandudza uye kuyedzwa kweakanakisa maitiro, zvikanganiso zvinoderedzwa, zvinoderedzwa kusvika nguva dzekupedzisira uye iko kuedza kushoma.
Kunyangwe iwe usiri software injinjiniya, zvinobatsira kuziva mhando dzesoftware uye nemhando dzembug uye urema. Zvinoenderana nemamiriro ezvinhu uye haugone kufungidzira mutengo nezvikanganiso zvekuvandudza software, asi iwe unogona kuona kushomeka.
Kukanganisa kwakawanda kunoziviswa nekuda kwekukanganisa kwehurongwa, kukosheswa zvisirizvo, zvinoshanda kana syntax zvikanganiso, zvidiki (isu tinoti zvakaomarara) zvikanganiso zvinotungamira kune makuru software zvikanganiso. Iko kukanganisa kunoitika kana mushandisi ari kushandisa software uye ivo vanofanirwa kunyatsorongedzwa. Pano isu tinopa mamwe akajairika software mainjiniya zvikanganiso kuzviona uye kuwedzera kugadzirwa panguva yekuyedza chikamu.